Kufanele Wazi Umsuka Wokuphikisa Kwabantu Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha Ekukholweni Kwabo KuNkulunkulu | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
1. Ukwazi Umsuka Wokuphikisa Kwabantu Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha Ekukholweni Kwabo KuNkulunkulu
Ngoba kuhlala kunokusha okuvelayo emsebenzini kaNkulunkulu, ngakho kunomsebenzi omusha, futhi kunanomsebenzi ongasasebenzi namuhla nomdala. Lo msebenzi omdala nomusha uyaphambana, kodwa uyaphelelisana; isinyathelo ngasinye silandela esokugcina. Ngoba kunomsebenzi omusha, izinto zakudala kumele, nakanjani, zisuswe. Isibonelo, ezinye izinqubo zakudala kanye nokwakuvame ukushiwo umuntu, kuhlanganiswe nalokho umuntu abhekana nakho eminyakeni eminingi eyadlula kanye nezimfundiso, kwakhe yonke inhlobo yemibono emqondweni womuntu. Kodwa okuyimpumelelo enkulu ekwakhekeni lena mibono komuntu wukuthi uNkulunkulu usazobudalula ubuso Bakhe ngokugcwele kanye nesimo esiyisisekelo kumuntu, kuhlanganiswe nokwenabisa, eminyakeni eminingi, kwezimfundiso ezindala zangesikhathi sasendulo. Kungcono ukuthi, ngesikhathi sokukholwa komuntu kuNkulunkulu, umthelela wemibono enhlobonhlobo uholele ekuqhubekeni kokwakhiwa nasekuguqulweni kolwazi olukumuntu okulo kukhona zonke izinhlobo zemibono emayelana noNkulunkulu—okunomphumela wokuthi abantu abaningi abasontayo abasebenzela uNkulunkulu sebephenduke izitha Zakhe. Ngakho, ukuqina kwemibono yenkolo kwabantu, kudala ukuthi baphikisane ngokwengeziwe noNkulunkulu, futhi baba yizitha ezinkulu zikaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uhlala umusha futhi awukaze ube mdala, futhi awukaze wakhe imfundiso futhi, kunalokho, uyaqhubeka nokushintsha futhi uzenze musha kakhulu noma kancane. Lo msebenzi uvezwa yisimo esiyisisekelo sikaNkulunkulu Uqobo. Futhi kuyisimiso esiyisisekelo somsebenzi kaNkulunkulu, kanti ungenye yezindlela uNkulunkulu afeza ngazo umsebenzi Wakhe wokuphatha. Ukuba uNkulunkulu bengasebenzi ngale ndlela, umuntu bengeke ashintshe noma akwazi ukumazi uNkulunkulu, futhi uSathane bengeke aze ahlulwe. Ngakho, emsebenzini Wakhe bekuqhubeka nokuba noshintsho olubonakala lwenzeka njalo, kodwa oluye lube ngolwesikhathi esithile. Indlela umuntu akholelwa ngayo kuNkulunkulu, nokho, yehluke kakhulu. Unamathela ezimfundisweni nasezinhlelweni ezindala, ezejwayelekile, futhi uma zizindala kakhulu zihlwabusa kakhulu kuye. Kungenzeka kanjani ukuthi umqondo onobuwula womuntu, umqondo ongaguquki njengetshe, wamukela umsebenzi omusha ongaqondakali kanye namazwi kaNkulunkulu? Umuntu uzonda uNkulunkulu ohlala emusha futhi ongakaze abe mdala; uthanda uNkulunkulu wakudala kuphela onezinwele ezimhlophe nonganyakazi. Njengoba uNkulunkulu nomuntu banalokho abakuthandayo ngokwabo, umuntu usephenduke isitha sikaNkulunkulu. Okuningi kwalokhu kushayisana kusakhona nanamuhla, ngesikhathi lapho uNkulunkulu kade enza umsebenzi omusha ngaso esicishe sibe iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Ngakho-ke, kungaphezu kwesisombululo. … Inhloso kaNkulunkulu beyiselokhu ingeyokuthi umsebenzi Wakhe ube musha futhi uphile, ungabi mdala futhi ufe, nalokho enza ukuthi umuntu abambelele kukho kwahlukana ngokwenkathi nesikhathi, futhi akuyikho okwaphakade futhi okungashintshi. Lokho kwenziwa wukuthi Yena unguNkulunkulu owenza umuntu aphile futhi abe musha, kunodeveli owenza ukuthi umuntu afe futhi aguge. Ingabe anikakuqondi lokhu? Unemibono ngoNkulunkulu futhi uyehluleka ukuyidedela ngoba awufuni ukwamukela. Akusikho ukuthi kwenziwa ukuqonda umsebenzi kaNkulunkulu kancane, noma ngoba umsebenzi kaNkulunkulu awuhambisani nezifiso zomuntu—noma, phezu kwakho konke, yingoba uNkulunkulu uhlala ebudedengu emsebenzini Wakhe. Ukuthi awukwazi ukudedela imibono yakho ngoba untula kakhulu ukulalela, futhi awunawo nomncane umfanekiso wesidalwa sikaNkulunkulu, futhi hhayi ngoba uNkulunkulu ekwenzela izinto zibe nzima. Konke lokhu kudalwe nguwe, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu; konke ukuhlupheka namashwa kudalwe umuntu. Izinhloso zikaNkulunkulu zihlala zizinhle: Akafisi ukukwenza uveze imibono, kodwa ukufisela ukuthi ushintshe futhi uguqulwe njengoba kuhamba iminyaka. Kodwa awukwazi ukubona umehluko, futhi uhlala ucubungula noma uhlaziya. Akusikho ukuthi uNkulunkulu ukwenzela izinto zibe nzima, kodwa ukuthi awunakho ukwesaba kokuhlonipha uNkulunkulu, futhi ukungalaleli kwakho kukhulu kakhulu. Isidalwa esincane ngeke size silinge sithathe ingxenyana yalokho owawukunikwe uNkulunkulu ngaphambilini, bese sikuthathe sihlasele uNkulunkulu ngakho—ingabe lokhu akukhona yini ukungalaleli komuntu? Umuntu, singasho ngokungachemi, akafanelekile nhlobo ukuveza imibono yakhe phambi kukaNkulunkulu, futhi akafanelekile ukuqhamuka nanoma yini engenamsebenzi, enukayo, ebolile akuzwa sengathi—kungangasho lutho ngaleyo mibono ekhuntile. Ayive iyinto engelutho kakhulu?
Kucashunwe “Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Yazini ukuthi nimelana nomsebenzi kaNkulunkulu, noma nisebenzisa imibono yenu siqu ukukala umsebenzi wanamhlanje, ngoba anizazi imiyalelo yomsebenzi kaNkulunkulu, futhi ngoba aniwuthathi ngokuthi ubalulekile ngokwanele umsebenzi woMoya oNgcwele. Ukumelana kwenu noNkulunkulu kanye nokuvimbela umsebenzi woMoya oNgcwele kudalwa imibono yenu kanye nokukhukhumala okusemvelweni yenu. Akukhona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awulunganga, kodwa yingoba anilaleli kakhulu ngokwemvelo. Emuva kokuthola ukholo lwabo kuNkulunkulu, abanye abantu abakwazi ngisho ukusho ngesiqiniseko ukuthi umuntu waqhamuka kuphi, kepha bayalokotha bathule izinkulumo emphakathini behlola ukulunga nokungalungi komsebenzi woMoya oNgcwele. Futhi baze bafundise abaphostoli abanomsebenzi omusha woMoya oNgcwele, bephawula futhi bekhuluma kungafanele; ubuntu babo buphansi kakhulu, futhi abanangqondo kwakona. Ngeke lufike na usuku lapho abantu abanjalo beyolahlwa umsebenzi woMoya oNgcwele, futhi bashe emililweni yasesihogweni. Abawazi umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa kunalokho bayawugxeka umsebenzi Wakhe, futhi baphinde bazame ukutshela uNkulunkulu ukuthi asebenze kanjani. Bangamazi kanjani abantu abangenangqondo kanjalo uNkulunkulu? Umuntu ufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngesikhathi senqubo yokumfuna nokuzizwela Yena; ufika ekumazini uNkulunkulu ngokukhanyiselwa uMoya oNgcwele, hhayi ngokumgxeka ngomathanda. Uma ulwazi lwabantu ngoNkulunkulu luya ngokucophelela, bayanciphisa ukumelana Naye. Uma siqhathanisa, uma ulwazi lwabantu ngoNkulunkulu luphansi, yilapho kulula ukuthi bamelane Naye. Imibono yakho, imvelo yakho endala, nobuntu, isimilo kanye nesimo sakho sokuziphatha, “isamba” omelana ngaso noNkulunkulu, futhi ngangokukhohlakala, ukonakaliswa kanye nokubaphansi oyikho, ingangokunyukela kokuba kwakho isitha sikaNkulunkulu. Labo abanemibono emibi kakhulu futhi abanesimo sokuzithwala banobutha ngisho nakakhulu noNkulunkulu othathe isimo sesintu, futhi abantu abanjalo abaphikikristu. Uma imibono yakho ingaguqulwanga, iyohlala njalo imelene noNkulunkulu; awusoze wazwana noNkulunkulu, futhi uyohlala uhlukene Naye.
Umthombo wokwembula isimo somuntu esonakele awulutho ngaphandle kukanembeza wakhe obuthuntu, ububi bemvelo yakhe nomqondo wakhe ongalungile, ukuba unembeza womuntu nomqondo wakhe kuyakwazi ukubuyela esimweni esijwayelekile, uzokulungela-ke ukusetshenziswa phambi kukaNkulunkulu. Kungenxa yokuthi, unembeza womuntu ulokhu undikindiki, umqondo womuntu awukaze ulunge futhi uyaqhubeka ngokuba buthuntu okwenza umuntu aqhubeke nokuhlubuka uNkulunkulu, okwenza waze wabethela uJesu esiphambaweni futhi wenqabela uNkulunkulu osesimweni somuntu ukuba angene ekhaya lakhe, futhi ulahla inyama kaNkulunkulu, ayibone njengembi futhi ephansi. Ukuba umuntu ubenobuntu nje obuncane, ubengeke akhohlakale kangaka ekuphatheni inyama kaNkulunkulu, uma ngabe ubesenomqonjwana nje ubengeke abe mubi kangaka ekuphatheni inyama kaNkulunkulu; uma ngabe usenaye unembeza omncane ubengeke “abonge” uNkulunkulu osesimweni somuntu ngale ndlela. Umuntu uphila ngesikhathi lapho uNkulunkulu eba yinyama kodwa akakwazi ukumbonga uNkulunkulu ngokumnikeza ithuba elihle kangaka, kunalokho uqalekisa ukuza kukaNkulunkulu noma azibe nje impela iqiniso lokuthatha isimo somuntu kukaNkulunkulu futhi ubukeka ephikisana naso futhi ekhathele yiso. Kungakhathalekile ukuthi umuntu ukuthatha kanjani ukuza kukaNkulunkulu, uNkulunkulu, ngamafuphi, ubesalokhu eqhubeka ngomsebenzi wakhe enganakile—yize umuntu engakhombisanga ngisho nokuncane ukwamukela kuye, ngobumpumputhe enza izicelo Kuye. Isimo somuntu sesibe sibi kakhulu, umqondo wakhe usubuthuntu ngokwedlulele kanti unembeza wakhe unyathelwe waphela ngomubi kanti kudala wagcina ukuba unembeza womuntu ojwayelekile.
Okwedlule：Umehluko Phakathi Kwezenzo Zangaphandle Ezinhle Nezinguquko Esimweni
Okulandelayo：Ekuthungatheni Indlela Yangempela, Kufanele Ube Nengqondo